CONTROL ARMS mpanamboatra sy mpamatsy - China CONTROL ARMS Factory
Fitaovana fanaraha-maso aoriana ambany ambany ho an'ny BENZ-Z5130
NAHOANA IREO ARMS CONTROL no ZAVA-DEHIBE? Ny fitaovam-piadiana mifehy dia manome fifandraisana sy pivot point eo anelanelan'ny fampiatoana ny fiara sy ny chassis. Mampifamatotra knuckle familiana amin'ny vatan'ny vatana, mifehy ny sandry, ary misy zana-tsipiky ny baolina izay miara-miasa mba hitazonana ny fanarahana kodiarana sy ny toerana misy azy. Ohatra, ny sandry ambany fanaraha-maso dia manampy amin'ny fametrahana ny toerana longitudinal sy lateral an'ny kodiarana raha mbola mihetsika ny fiara. Ny fitaovam-piadiana mifehy ny fanoherana hery marobe, toy izany ...
Fitaovana fanaraha-maso aoriana azo zakaina ho an'ny Audi - Z5137
Ny sandry fanaraha-maso dia mamory fitambarana baolina ary mikorisa amin'ny vatana matanjaka be. Ny ampahany mitambatra amin'ny baolina dia mihetsika amin'ny alàlan'ny fampifandraisana amin'ny knuckles miaraka amina faritra fampiatoana sy kodiarana. Ny fitrandrahana fingotra dia manamboatra tsara ny vatan'ny fiara sy ny sandry mifehy ary mifoka ny hatairana. ■ Vatana matanjaka Manana vatan'ny tànana mifehy mahery izay afaka manohana ireo faritra fampiatoana amin'ny alàlan'ny ravina vy mafy mihodina sy ireo fitaovana forza vita amin'ny alimo kely maivana. ■ Fitsaboana matevina mahery Tangrui dia manana eleTangru ...
Ankavia havia ambany ambany fanaraha-maso ho an'ny Honda Pilot -Z5133
Inona no atao hoe sandry mifehy? Ny fitaovam-piadiana mifehy, izay antsoina indraindray hoe "A arm," no fototry ny rafitra fampiatoana anao eo aloha. Raha tsorina, ny fitaovam-piadiana mifehy no rohy mampifandray ny kodiarana eo alohan'ny fiara. Ny lafiny iray dia mifamatotra amin'ny fivorian'ny kodiarana ary ny tendrony hafa dia mifandray amin'ny rafitry ny fiaranao. Ny sandry fanaraha-maso ambony dia mifamatotra amin'ny faritra avo indrindra amin'ny kodia eo aloha ary ny sandry fanaraha-maso ambany dia mifandray amin'ny faritra ambany indrindra amin'ny kodia eo aloha, miaraka amin'ny sandry roa avy eo mifatotra amin'ny vatan'ny ca ...
Aluminium Brand New Front Control Arm ho an'ny Audi-Z5139
Tangrui Oem Front Control Arm ho an'ny Porsche-Z5140
6L8Z-30-78AA Ary ny fitaovam-piadiana YL823078AA ho an'ny KUGA-Z5142
Mitodiha any Tangrui raha mila familiana sy fampiatoana. Ny sandry mifehy sy ny sandry fanaraha-maso no tena izy. Amin'ny maha-singa manakiana ny famolavolana fiara sy ny ampahany tsy miova amin'ny rafitra fampiatoana dia mila misafidy tànan'ampifehy kalitao OE ianao. Izany no antony ahafahanao mitodika any Tangrui hahazoana faritra azo itokisana sy fampiatoana. Nahoana ianao no tokony hatoky an'i Tangrui amin'ny fitaovam-piadiana? Ny sandan'ny fifehezana anay dia mizaha ny zotram-pitsaboana 100% sy ny fitsapana ny lesoka amin'ny ultrasonic mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny OE ...
OEM TD11-34-300B sy TD11-34-350B ARMS CONTROL Ho an'ny Mazda -Z5146
Fitaovam-piadiana fanaraha-maso avo lenta OEM 54500-3S000 Ho an'ny HYUNDAI SONATA-Z5149
Fitaovana fanaraha-maso ambony azo ovaina anoloana ho an'ny Audi-Z5138
Tangrui Customised Control arm mety ho an'ny Ford-Z5141
Famolavolana antsipiriany tsara momba ny fifehezana mety tsara ho an'ny Honda - Z5143
Shock Absorber Bolt, Shock Absorber fingotra, Knuckle familiana eo aloha, Hood Shock Absorber, Hub misy kodiarana, Tyre Ball Joint,